GALFATA- Itaaba Haaraa Dargaggoo dhaloota qubeetiin – – Beekan Guluma Erena
GALFATA- Itaaba Haaraa Dargaggoo dhaloota qubeetiin –	Beekan Guluma Erena
Books, Poems April 29, 2016April 29, 2016OROMO
152SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
GALFATA- Itaaba Haaraa Dargaggoo dhaloota qubeetiin
Galfati kitaaba ajaahibaati yoon jedhee arboomsuukoo miti. Kitaaba qooddattoota heedduun jalqabee, buhaa bahii jireenyaa baayyee keessa lufsiisuun dhimma jaalalaa, hawwaasummaa, seenaafi aadaa akkasumas afoola Oromtichaan faayameera. Kitaabni kun jireenya barataafi barattuu Oromoon amma dhamdhamaa jiran. Maatii gammachuu mulqamee lammiisaa waansaaf dhabee boosooma taa’e, Xiqqaan tiratee guddachuun, guddaa dur isa qucarsu caalee yeroo argamu. Maal kana qofa GALFATI galaa dubartiin harka toleetti galaasteen tokkuma.
Yaa’insi kitaabichafi jechoonni achi keessaammoo jabinaaf qaroomina saba Oromoo argisiisa.Addumaan waa’ee saba Oromoo Yajjuu waan baayyeetu irraa baratama. YAJJUU WALLOOn eenyu ? Eessa jiru? Haala kam keessa jiru? Hundaafuu deebiin kitaabuma kana keessatti argama.Waa’ee qaroomina Oromoofi beektota Oromiyaas haala ajaahibaan qindeeffamanii kitaaba kana keessa jiru. Dhumarratti jechan kitaaba kana keessaa arge muraasa yoon jedhe “CUUBEE GADHEEN MANNEE NYAATTI” fi ” Sareen qonqoftuun ilmooshee nyaatti; namni gadhees Galfataaf hin iltu” jedha. Kitaabichi torbee muraasa booda manneen raabsaa garaagaraa armaan gadii kana keessaa iddoo muraasatti argamuu mala.
Kitaabanisaa jalqabaa dubbistoota biratti ajaa’ibsiifannaa guddaa kana rgateefi irra deebi’amuun kan maxxanfamedha.
Silaas waan namni akeeke caalaa kan waaqayyo yaade waan raawwatuuf Lalisaan dhalatee ganna tokkoof ji’a jahaaffaasaatti walitti bu’insa maatii gidduutti ta’een Abbaafi haati Lalisaa fuula jaarsolii biyyaa duratti wal hiikuun gargar ba’an. Abbaansaa obbo Indiris yeroo sanaa eegalee waan biyya ba’eef Lalisaafi obboloonnisaa filannoo jiraachuu haadhasaanii wajjin godhachuun jireenya itti fufan. Yeroonis jijjiramtee umuriin ijoollee gara dargaggummaatti kan dargaggoommoo gara jaarsummaatti siiqaa akkuma deemeen umuriinsaa barnootaaf geenyaan ALH tti bara 1993mana barumsaa olmaa Daayimmanii magaalaa Innaanggoo seenuun barnoota eegale. Turtii waggaa lamaa boodas 1995 Eessumnisaa Obbo Abdataa Dhabsuu gara mana barumsaa sadarkaa 1ffaa magaalaa Innaanggoo geessuun maqaasaas Lalisaa jechuun kutaa 1ffaatti galmeessanii deebi’an. Lalisaanis yerosirraa eegaluun barnootasaa idilee itti fufuun sadarkaa dareetiin giddu galeessa ta’uun gara kutaa 2ffaatti darbee. Bara itti aanus barnoota eegalee rakkoo hawwaasummaa harmeesaa quunnameen barnoota addaan kutuuf dirqame.
Waggaa tokko duubatti hafuun bara 1997 kutaa 2ffaa galee barnoota itti fufe. Ergasii as gargaarsa tokkittii harmeesaan utuu barnoota addaan hin kutin bara 2003 manuma barumsaa sanatti qormaata biyyaalessaa kutaa 8ffaa qoramee qabxii gaariin gara kutaa itti aanutti darbe.Lalisaan akkuma sadarkaan barnootasaa dabalaa adeemee dandeettiin yaaduufi gocha hawwaasa naannoosaatiirratti rawwataman xinxaluus jabaachaa dhufe. Keessumaa filannoo biyyaalessaa bara 2002 guutuu xoophiyaa keessatti adeemsifamerratti paartiilee mormaa magaalittii keessatti of beeksisuuf dhufan irratti gocha bulchitoonni aanaa laaloo assaabii nama itti bituun namoota paartiilee mormaa bakka bu’uun dorgomuuf dhufan reebsiste argee umurii ijoollummaan inaaffaan biliisummaa saba Oromoo keessasaa buluu eegale. Sadarkaa barnootaa erga kutaa 9 gara kutaa10 tti darbees bilchinni yaadaasaa gabbataa yeroo dhufu kitaabota Asoosama Afaan Oromoo ergifatee dubbisuu eegale. Dandeettii keessasaa jirus dafee waan hubateef yeroma barnootaan sadarkaa gadiirra jiruyyuu walaloofi baacoowwan addaa addaa dareefi hiriira mana barumsaarratti dhiheessa ture. Itti gaafatamaa gumiiwwan addaa adda ta’unis yeroo garaa garaatti mana barumsaasaa tajaajileera. Dhaabbata amantaa Adiveentistii jedhamu keessattis Sambata fi ayyaanota garaagaraarratti walaloo dhiheessaa ture. Bara 2004 ayyaana daayimmanii sababeeffachuun walaloo mata dureensaa”GAA’ELAAFI QABEENYA” jedhu har’a lubbuun jiraachuu baattus hiriyaa akka obboleettiisaatti jaallatu durbee Ayyaanee Birruu faanaa amantoota fuulduratti dhiheessuun kolfaaf bo’ichaan garaa amantootaa raasaniiru.
Teessoo kanaa gadiin argadhaa!!
Yaada dabalataaf face book Lalisaa Indiris Adam
Gmail dhidhiibba@Gmail. com
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa152SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← IRRA DIBAA-Itti Fakkeessuu/ – Jaallataa Tokkummaa Oromootiin
“GOONNI BIYYAAF KUFE..!” →